Danjiraha Somaliland ee UAE oo ka Hadlay Mashruuca Biyo Ballaadhinta Hargeysa | Somaliland.Org
February 16, 2017	Hargeysa(Somaliland.Org)- Danjiraha Somaliland u fadhiya dalka Imaaraatka carabta Md. Baashe Cawil Xaaji Cumar, ayaa booqday mashruuca biyo-ballaadhinta caasimadda Hargeysa ee Xumbo-weyne oo ka mid ah mashaariic horumarineed oo dawladda imaaraatku (UAE) ka fulinayso Somaliland.
“Mashruucani waxa uu ka mid yahay mashaariic dawladda imaaraatka carabta (UAE) ku caawisay Somaliland. mashruucan Xumbo-weyne waxa uu ku dhow yahay gabo-gabo,waxaana mahadeeda koowaad leh dawladda imaaraatka carabta oo ah saaxiibkeenna koowaad oo haddii ay abaaro tahay iyo haddii ay horumarin noqotaba mar walba garab taagan Somaliland,”ayuu yidhi Safiirka Somaliland ee imaaraatka carabtu.
Waxa kale oo uu intaas ku daray, “Waxa kaloo aanu u mahadcelinaynaa dadka halkan (Xumbo-weyne) degan ee sida wacan ula shaqeeya, una soo dhaweeyay mashruuca biyo ballaadhinta. waxaan leeyahay horumarku waa kaas wixii wanaagsan waa la ilaashadaa.”
Danjire Baashe waxa uu shacbiga Somaliland ugu baaqay inay garab istaagaan wixii horumar ah ee xukuumadda Somaliland u soo kordhiso.
Previous PostKULMIYE oo u Xafladeeyey Midowga Dhexmaray Garabkii ka Baxay WADDANINext Post“Mashruuc kasta oo madaxweynuhu soo qaadaba waa la dhaliilaa,Haddana waa la Mahadiyaa”	Blog